China pp maseru bhodhi yezvinhu zvigadzirwa uye fekitori | Lonovae
Thermally yakarongedzwa nechero dura rehuchi musimboti uye maviri akaturikidzana ePP jira, yedu PP muzinga pani pane yakanakira reusable kurongedza, mota uye kuvaka & kuvaka.
Yakajairwa 550, 1100mm
Grey, chena, Dema, Bhuruu, uye nezvimwe.
Smooth, mat, rough, magadzirirwo.
1.Kusimba kudzvanyirira uye kukanganisa kuramba:
PP zinga bhodhi rinotora ekunze masimba, nekudaro zvichideredza zvakanyanya kukuvara kunokonzerwa nekukanganisa uye kurovera. Inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo zhinji senge mota bhamba uye midziyo yekudzivirira yemitambo.
2. Kurema kwechiedza uye kuchengetedza zvinhu:
Zvinoenderana neyakanaka michina yekuita, iyo PP huchi bhodhi inogona kuita zvakafanana kuita nezvishoma zvinoshandiswa, yakaderera mutengo uye huremu huremu, inoderedza zvakanyanya mutoro uremu hwekutakura.
3. Ruzha kuputira kuita kuri pamusoro:
Inoshanda kurwisa kutapurirana uye nekudaro inogona kushandiswa kudzivirira midziyo yemotokari dzinofamba uye zvimwe zvivakwa zvekutakura.
4.Yakanakisa kupisa kupisa kuita.
PP zinga bhodhi ine rakanakisa kupisa kuputira mashandiro, ayo anogona kunyatsovharira kupisa kupisa kutapurirana, uye inoita yemukati tembiricha riine kugadzikana.
5. Kudzivirira kwemvura uye yakasimba corrosion kuramba:
Nekuda kwehunhu hwayo mbishi zvigadzirwa, inogona kushandiswa kwenguva yakareba munzvimbo dzenzvimbo ine huwandu hwemvura yakawanda uye yakasimba ngura.
6.Green uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza:
Energy kuchengetedza, 100% inogadziriswazve, VOC uye formaldehyde yemahara mukugadzirisa.
Iko kushandiswa kwemaseru bhodhi
Polypropylene muzinga bhodhi inonziwo PP maseru bhodhi / pani / pepa. Iyo inoumbwa nemapaneru maviri matete, akasunganidzwa akasimba mune yakaturikidzana yehuchi hwehuchi hwenongedzo yezvinhu kumativi ese maviri. Zvinoenderana neakanaka echimishini mashandiro, PP huchi bhodhi rinoshandiswa zvakanyanya kuganda, siringi, chikamu, dhizaini, pasi uye kushongedza kwemukati kwemotokari, yacht, nechitima.
Pashure: HDPE biogas pepa
Zvadaro: mapeji ehuchi hwenzvimbo yemotokari